အဆိုပါ Porn Box ကို (2018) တွင်မှီဝဲ။ (Grubbs ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုပုံစံကိုသုံးသပ်ခြင်း) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
အဆိုပါ Porn Box ကို (2018) တွင်မှီဝဲ။ (Grubbs ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကိုဆန်းစစ်ခြင်း)
ဖေဖော်ဝါရီလ 2019, အတှဲ 48, ပြ2နာ ၂, စစ 449-453 |
လိင်ကအကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာများ၏ကြည့်ရှုခြင်းမရှိနည်းလမ်းဖြင့်သစ်တစ်ခုဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်နှင့်ရရှိနိုင်ခေတ်သစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသဘောသဘာဝနှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများနားလည်ရန်ရှာကြံပညာသင်ဆုအတွက်တစ်ဟုန်ထိုးမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဆက်နွယ်နေပါသည်, ထိုခန့်မှန်းလေ့လာများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ရလဒ်များမကြာခဏလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့်စုံတွဲများလိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာလောင်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမသာကန့်သတ်ဆက်လက်တဲ့အကွက်ထဲသို့သူတို့ကိုယ်သူတို့မှီဝဲခဲ့ကြပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဆက်စပ်ပျေါအဘယျအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ပညာရှင်များ သုခချမ်းသာ။ ဤ box အများအပြားပညာရှင်များ, Clinician နှင့်မူဝါဒချမှတ်သူများညစ်ညမ်း (ညစ်ညမ်းအမြဲမကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်အစဉ်အမြဲအကောင်းဖြစ်စေဖြစ်ပါတယ်), အဖြစ်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်မပြည့်စုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာနားလည်မှုကိုစောင့်ရှောက်သောဤဒေသ၏အတိုင်းအတာများန့်အသတ်နှင့်စပ်လျဉ်းယူသောကျဉ်းမြောင်းသောအမြင်နှစ်မျိုးလုံးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လိင်နှင့်မီဒီယာစားသုံးမှု၏လယ်ပြင်တွင်အများအပြားဆက်စပ်ကိစ္စများကဲ့သို့ပင်ညစ်ညမ်းမကြာခဏလူများနှင့်စုံတွဲများ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းခြင်းဖြင့် setting များတစ်ခုဌန်အတွက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမီဒီယာများ၏မတူညီအမျိုးအစားများကိုအသုံးချတဲ့ကျယ်ပြန့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းတဦးတည်းအရာမဟုတ်ပါ, နှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများ Contextual အချက်များတစ်အကွာအဝေးပေါ် မူတည်. ဖွယ်ရှိမတူညီနှင့်မသိမသာကွဲပြားကြသည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏မတူညီသဘောသဘာဝထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုတိကျတဲ့ဒြပ်စင်ထက်ကျယ်ပြန့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပညာသင်ဆုပေးဖို့ကိုယ်နှိုက်ကချေးငှားသည်။
Grubbs, ပယ်ရီ, အလိုရှိနှင့်ရိဒ် (2018) သူတို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အဆိုပြုထားသောပုံစံကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏အရေးကြီးသောအရာ၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစားသုံးသူများအနေဖြင့်ပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ဤပညာရှင်များထောက်ပြသည့်အတိုင်း၊ ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုများသည်အပျက်သဘောဆောင်သောတစ် ဦး ချင်းသုခချမ်းသာနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Grubbs, Exline, Pargament, Volk, & Lindberg) 2017; Grubbs & Perry၊ 2018) ။ သို့သော်လည်းညစ်ညမ်းပဟေဠိ၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုနားလည်ရန်သူတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ပစ်မှတ်ဆောင်းပါး၏စာရေးဆရာများသင့်လျော်သောအခြေအနေတွင်လျှောက်ထားလျှင်မဟုတ်ရင်အရေးကြီးသော utility ကိုရှိစေခြင်းငှါ, စိတ်ကူးများ overextending နှင့် overgeneralizing ယခင်အလုပ်၏ထောငျခြောအများအပြားသို့ကျလိမ့်မည်။ ပစ်မှတ်ဆောင်းပါးအားဖြင့်ကြီးပြင်းမေးခွန်းကငျြ့ဝတျ incongruence အမှန်လျှင်ဆင်းအနာဆိုး "ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစွဲ၏အတွေ့အကြုံအတွက်မူလတန်းမောင်းနှင်မှုအင်အားသုံး။ " ကိုဖန်ဆင်းအဆိုပါအခိုင်အမာကိုယ်ကျင့်တရား incongruence သာဖြစ်ပါတယ်aအချက်တစ်ချက်ပေမယ့် မူလတန်း ညစ်ညမ်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်အတွက်အချက်တစ်ချက်။ ကအဆိုပြုထားမော်ဒယ်ကဖွယ်ရှိပေထက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏လေ့လာမှုတွင်ပိုမိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားရှိပါတယ်ပြောဆိုသောသောဤပြောဆိုချက်ကိုပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ကိုပစ်မှတ်ဆောင်းပါးအတွက်အဆိုပြုထားမော်ဒယ်များ၏အပြုသဘောဆောင်ဒြပ်စင်အချို့ကိုနှင့်အတူစတင်ကြပါစို့။ ပထမဦးစွာ Grubbs et al ။ (2018) မကြာခဏမွငျ့မားနှင့်ညစ်ညမ်းရှုမြင်ပေမယ့်ကိုယ်ကျင့်တရားကိုမကြာခဏဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များဖုံးလွှမ်းနေတာကို, ကဆန့်ကျင်သောသူတို့၏အမျိုးအအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုချဲ့ကားပြောဆိုမှုများ, ညစ်ညမ်း related သုတေသန၏အရေးပါသောဒြပ်စင်မီးမောင်းထိုးပြကြပြီ။ အဖြစ် Grubbs et al အားဖြင့်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ , ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းကြောင့် Grubbs et al နေဖြင့်အကြံပြုကိုယ်ကျင့်တရား incongruence မှညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အန္တရာယ်မှာပိုပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားယခုလည်းမရှိ။ နှင့်အခြားသူများ (Grubbs et al ။ , 2017; နယ်လ်ဆင်၊ ပါဒီလာ - Walker နှင့်ကာရိုး၊ 2010; ပယ်ရီ & ဝှိုက်ဟတ်၊ 2018) ။ ဤသည်အရေးကြီးသောလက်တွေ့နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအရေးပါမှုရှိပါတယ်။ ၎င်းအနေဖြင့်ဆရာ ၀ န်များသည်ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများကိုသူတို့၏ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်းပညာရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်စွဲခြင်း၏အမှန်တကယ်အန္တရာယ်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဘုံယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဒဏ္onာရီများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သင့်ကြောင်းလည်းအကြံပြုထားသည်။ ဤအရာအားလုံးကို Grubbs et al ရှိသည့်ဆောင်းပါး၏အဆုံးတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့သက်သေအထောက်အထားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြmoralနာများသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှု (PPMI) ကြောင့်အမှန်တကယ်အတင်းအကျပ်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအပြင်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအရေးကြီးသောလက်တွေ့ကျစဉ်းစားချက်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ ပို၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရလျှင်ပစ်မှတ်ဆောင်းပါးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆက်စပ်သောအချက်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်များသည်အရေးကြီးကြောင်းထပ်ဆင့်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုပညာသင်ဆုနှင့်လက်တွေ့ကဏ္workများတွင်ထည့်သွင်းရန်ဤတိုက်ရိုက်တောင်းဆိုချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွင် (Willoughby & Busby၊ 2016) ။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်ချက်သို့မဟုတ်အခြားပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပအကြောင်းအချက်များဖြစ်စေ, ထိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတောင်းဆိုဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အမြဲအကျိုးသက်ရောက်မှုများထဲမှအမျိုးအစားဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပညာရှင်များနှင့်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့် shortsighted ဖြစ်ပါတယ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီအရေးကွီးတဲ့ပံ့ပိုးမှုများကိုနေသော်လည်း PPMI ၏အဆိုပြုပုံစံသေသပ်စွာတဦးတည်းသီအိုရီမော်ဒယ်သို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုစုစည်းတင်ပြရန်မှာအခြားအကြိုးစားမှုကဲ့သို့တူညီသောထောင်ချောက်အများအပြားသို့ကျရောက်ပါတယ်။ generalized သီအိုရီမှာထိုကဲ့သို့သောကြိုးစားမှုဖွယ်ရှိအခညျြးနှီးပညာသင်ဆု၏ဤဧရိယာဖြစ်နေဆဲနှင့်သတိပြုဖို့လိုတဲ့အဆင့်အထိကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ဘယ်လောက်သက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အရေးကြီးသောအပေါ်မည်သည့်ကောက်ချက်မချခင်ပညာရှင်များသို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆိုယူလိမ့်အကြံပြုထားတဲ့အတွက်အခြေတည်ပြည်နယ်ပေးအပ်ထားတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းပေါ်လစီချမှတ်သူများညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာကြည့်ရှုတတ်သို့မဟုတ်ပါကရှုမြင်ကြောင်းလူအပေါင်းတို့အားတစ်ခုခုလုပ်မထားဘူးဖြစ်စေကြောင်းအကြံပြုဖို့စိတ်အားထက်သန်ပေါ်လာပါသည်။ ညစ်ညမ်းချိတ်ဆက်ထားသောကျောင်းကသုတေသန၏ကျယ်ပြန့်အများစုကြောင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကအနုတ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်စုံတွဲရလဒ်များမှဆက်စပ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအသင်းအဖွဲ့များ spurious ဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့အတိုင်းပညာရှင်များ, အဓိကအားဖြင့်လက်မခံကြောင်း, အကြောင်းအရာဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ပစ်မှတ်ဆောင်းပါးမကြာခဏ Grubbs et al အဖြစ်, ဒီထောင်ချောက်ထဲသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ မကြာခဏယခင်ပညာသင်ဆုတှငျတှေ့သက်ရောက်မှုများအများစုရှင်းပြကူညီပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့ PPMI မော်ဒယ်ချင်မှထင်ရှား။ , သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများပညာသင်ဆုနောက်ထပ်အငြင်းပွားစရာဧရိယာ၏ငါ့ကိုသတိပေး: ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ ကျယ်ပြန့်ပစ်မှတ်ဆောင်းပါးနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. များစွာသောအခြားဆက်စပ်လေ့လာမှုများဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းကအမြဲတမ်းအပြုသဘောဆောင်သို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဆိုကြသည်ရန်ကြိုးစားနေကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ပါလိမ့်မယ်ဖန်ဆင်းသူကဲ့သို့ဆိုပါတယ်။ တဦးတည်းရိုးရှင်းစွာအကောင်းတိုင်းတာဘို့တစ်ဦးချင်းစီအချက်များအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထား, ကျန်းမာရေးအမျိုးမျိုးရှုထောင့်နှင့်အတူဗီဒီယိုဂိမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းပတျသကျမှဖြစ်လျှင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, သုခချမ်းသာနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားယုံကြည်ချက်များအကြားကိုက်ညီမှုအသင်းအဖွဲ့များဆင်တူ, ရလဒ်များသဘာဝကျကျကွဲပြားမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, မကြာခဏနေ့တိုင်းနာရီတစ်ဦးတည်းအကြမ်းဖက်ဂိမ်းများကိုကစားသူတစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီဖွယ်ရှိမှန်မှန်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူလူမှုရေး-based ဂိမ်းကစားသူသည်အခြားတစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကြီးအကျယ်ခြားနားရလဒ်များရပါလိမ့်မယ်။ သုတေသနကိုတောင်အကြမ်းဖက်ဂိမ်းထိခိုက်သက်ရောက်မှု (Anderson က et al ရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုထွက် bares ။ , 2017အခြားသူများနှင့်လူမှုရေးကစားနည်းများသည်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သည် (Coyne, Padilla-Walker, Stockdale, & Day,) 2011; ဝမ်, တေလာ, & Sun က, 2018) ။ ကလေ့လာမှုအောက်တွင်အလွန်အရာများ၏မွေးရာပါအပြောင်းအလဲနှင့်ရှုပ်ထွေးပယ်ချဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းလေ့လာနေဖို့အလားတူထုံးစံ၌, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုအကြောင်းကိုကျယ်ပြန့်ယေဘုယျစေရန်ကြိုးစားနေတံဆိပ်လက်မှတ်ကိုလွဲချော်။
၎င်း၏ဇာတိအားဖြင့် PPMI ၏အဆိုပြုမော်ဒယ်ယေဘုယျညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်မော်ဒယ်ဖြစ်နေမကောင်း-သင့်လျော်ပုံရသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, ပစ္စုပ္ပန်မော်ဒယ်များ၏အာရုံစိုက်မျှမျှတတကျဉ်းမြောင်းသည်။ အကျိုးစီးပွားရလဒ်ကိုဖြစ်ပါသည် ရိပ်မိ ကြောင့် (compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်သုခချမ်းသာတခြားရည်ရွယ်ချက်အကဲဖြတ်န်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါဆန့်ကျင်ဖို့ပိုရည်မှန်းချက်လက်တွေ့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း) ညစ်ညမ်းမှပြဿနာများကို။ အဆိုပြုထားမော်ဒယ်လည်းသာညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးကငျြ့ဝတျကန့်ကွက်ရှိသူတို့တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ဤသည်ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ပို. ပင်မော်ဒယ်များ၏အာရုံကျဉ်းမြောင်း။ PPMI ဘယ်လိုပျံ့နှံ့နေတဲ့သည်နှင့်အထွေထွေအများပြည်သူပုံစံကိုဘယ်လိုသက်ဆိုင်ရာပါသလဲ ဒါဟာပြောဖို့ခက်ခဲသည်။ PPMI, Grubbs et al ဘို့မိမိတို့အငြင်းအခုံ၌တည်၏။ (2018) ဒီမော်ဒယ်လျှောက်ထားမယ်လို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူအဘယ်အရာကိုအချိုးအစားနှင့် ပတ်သက်. နီးပါးမျှဆွေးနွေးမှုပါဝင်သည်။ အဲဒီအစား, Grubbs et al ။ အကြိမ်ကြိမ်ကငျြ့ဝတျ incongruence များအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်သောများအတွက် "များစွာသောလူ" ကိုကိုးကားခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏မော်ဒယ် overgeneralizing နှင့်အတူအကြောင်းအရာပေါ်လာပါသည်။ ဤသည်ဘာသာစကားဆောင်းပါးအတွင်းနီးပါးတစ်ဒါဇင်အဆပုံပေါ်ပေမယ့်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆန့်ကျင်ခိုင်မာတဲ့အလုံအလောက်ယုံကြည်ချက်ရှိကြောင်းလူဦးရေရဲ့တစ်ကယ့်အချိုးအစားနဲ့ချိတ်ဆက်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့ပညာအတတ်နှင့်ဆက်ဆက် Grubbs et al အားဖြင့်ကိုးကားခဲ့ပါဘူး။ (2018), အမှန်တကယ်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ကြောင်း Grubbs et al အမျိုးအစားကိုဖန်တီးပေးရန်ညစ်ညမ်း၏အားကြီးသောလုံလောက်အောင်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ရှိစေခြင်းငှါညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အဘယ်သို့ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်နည်းနည်းသတင်းအချက်အလက်များလည်းမရှိ။ အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါကသစ်တစ်ခုပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး: hypersexuality နှင့်ဆန့်ကျင်ငြင်းခုံ (Halpern, 2011; ရိဒ် & ကafka, 2014) နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများ၏ပျံ့နှံ့မှုလျစ်လျူရှုနှင့်ပင်အတူစတင်ပြဿနာသို့မဟုတ် compulsive အသုံးပြုမှုပုံစံများရှိညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အဘယ်သို့ရာခိုင်နှုန်းကိုစူးစမ်းကြပြီလေ့လာမှုများ၏စာခေါငျးပါးမှဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်သက်သေအထောက်အထားများကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ခွင့်ပြုချက်မှကြွလာသောအခါအများစုတစ်ဦးချင်းစီအတော်လေးကလက်ခံကြသည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ကာရိုး et al ။ (2008) ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေထက်ဝက်နီးပါးလည်းဒီစိတ်ဓါတ်များနှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့နမူနာမှာနေတဲ့လူငယ်လူကြီးယောက်ျားနီးပါး 70%, ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ခဲ့ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီကစျေးနှုန်း, ပက်တာ, Regnerus နှင့် Walley (2016) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမကသာလူနည်းစုကြောင့်ညစ်ညမ်းတရားမဝင်ဖြစ်သင့်ယုံကြည်အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်းများတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သက်သေအထောက်အထားဆက်ဆက်ကန့်သတ်နေစဉ်, ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများညစ်ညမ်း၏မရရှိခြင်း၏ခေတ်သစ်ငယ်ရွယ်လူကြီးများနှင့်လူကြီးများအကြား Non-စံတန်ဖိုးဖြစ်ပေါ်လာအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာလူအများစုထိုကဲ့သို့သော incongruence ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြအံ့သောငှါအဓိကအမြင်ကင်းမဲ့လျှင်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence များစွာသောလူများအတွက်ဘုံပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာငြင်းခုန်ဖို့ဆက်ဆက်ခက်ခဲသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ရင်ဆိုင်ကြောင့်လူဦးရေကိုအသုံးပြုပြီးညစ်ညမ်း၏အချိုးအစားလူနည်းစုဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ်, တစ်ပင်သေးငယ်အချိုးအစားကိုသူတို့အသုံးပြုခြင်းကိုအတူ Self-အစီရင်ခံစာရိပ်မိပြဿနာများပေါ်လာပါသည်။ Grubbs, Volk, Exline နှင့် Pargament (နေဖြင့်ယခင်အလုပ်2015) ဒီအအတည်ပြုပုံရသည်။ Grubbs et al အားဖြင့်ဥပမာ, CPUI-9 သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သုံးလေ့လာမှုများ။ (2015) 600 တစ်ဦးချင်းစီထက်အနည်းငယ်ပိုအဘို့မှတ်ကြောင်းအသုံးပြုသွားမည်ခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းအနေဖြင့်တဦးတည်းကိုရိပ်မိပြဿနာများ၏နိမ့်ဆုံးပမာဏကိုကိုယ်စားပြုဘယ်မှာခုနစ်ခုမှတစ်စကေးတွင်သုံးလေ့လာမှုများဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှ 2.1, 1.7 နှင့် 1.8 ခဲ့ကြသည်။ ဒါကနမူနာအတွက်လူအများစုကသူတို့အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ရိပ်မိပြဿနာများ၏အဘယ်သူမျှမအဆင့်နည်းနည်းအစီရင်ခံခဲ့သည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အခွားသောပညာရှင်များ Hald နှင့် Malamuth (အတူအလားတူဖြစ်စဉ်မှတ်ချက်ချကြပါပြီ2008) နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပိုပြီးအပြုသဘောထက်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအစီရင်ခံရန်လေ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ရိပ်မိသက်ရောက်မှု၏ဘုံမှာ, အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု၏သဘောထားအမြင်ကိုလည်းလူနည်းစုအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။
အတူတူယူအဆိုပြုထား PPMI မော်ဒယ် created ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence နှင့်ရိပ်မိပြဿနာများကိုသတင်းပို့သူအုပ်စုတစ်စု၏ပင်သေးငယ်အချိုးအစားဖို့လိုအပ်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ရှိသည်သောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုသာလူနည်းစုဖို့ကန့်သတ်, အတော်လေးအာရုံစိုက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဤသည်ကျဉ်းမြောင်းသောအာရုံမူလကပင်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ Grubbs et al ။ ရဲ့ (2018) အာရုံ (စတုရန်းသောအရာကို Hald နှင့် Malamuth အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသော2008) "Self-ရိပ်မိသက်ရောက်မှု" စတင်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများစဉ်းစားရန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောနှင့်အရေးကြီးလှသည်ပါပြီ။ ထိုသို့သောမော်ဒယ်များသူတို့သက်ဆိုင်ရာနေသောများအတွက်တိကျသောလူဦးရေနှင့်အတူလက်တွေ့နှင့်ပညာရေးအားထုတ်မှုလမ်းညွှန်အတွက်အရေးကြီးသော utility ကိုရှိနိုင်ပါသည်။ ငါပြီးသားမှတ်ချက်ပြုသကဲ့သို့, ဒီလမ်းအတွက်အဆိုပြုထားမော်ဒယ်အချို့အခင်းအကျင်းအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်မည်အကြောင်းအရေးပါသောအလှူငွေပေးထားပါတယ်။ သေအချာထက်ဒီအလှူငွေ, Grubbs et al ဘက်လျက်။ သူတို့ရဲ့စံပြ overgeneralize နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ကျင့်တရား incongruence နှင့်ရိပ်မိပြဿနာများကိုနှစ်ဦးစလုံးအောင်တို့ကပိုပြီးကျယ်ပြန့်သူတို့ရဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အာရုံလျှောက်ထားရန်စိတ်အားထက်သန်သည်ထင်ရှားမတစ်ခုဖြစ်သည်တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာ: ဘုံ။ အဆိုပါစာရေးဆရာများသာမကညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဓိကအချက်တစ်ချက်ကငျြ့ဝတျ congruence ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် "ဒီတာ [ညစ်ညမ်း] ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစာပေစာတမ်းများကိုအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအမှန်တကယ်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ၏ဆိုးကျိုးများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါသည်။ " ဟုဆိုကာကြောင်းကိုအကြောင်းအမြန်ခဲ့ကြသည် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအများဆုံးအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရိုးရိုးကငျြ့ဝတျ incongruence ၏မှလည်းဖြစ်ကြောင်းရဲရင့်သော်လည်းဖွယ်ရှိအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အထောက်အထားပေးထားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြောဆိုချက်ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်မှာတက်ကျင်းပရန်မဖြစ်နိုင်ပုံပဲပေါ်လာပါဘူး။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်ထုတ်ပြန်ချက်များမှဦးဆောင်တဦးတည်းအယူအဆရေးရာပြဿနာကြောင့် Grubbs et al ဖြစ်ပါတယ်။ (2018) နမူနာအရွယ်အစားနှင့်အတူစာရင်းအင်းအရေးပါမှုသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားရောထွေးဖို့ပေါ်လာပါသည်။ နှစ်ခု related စေခြင်းငှါနေစဉ်, သူတို့ဆက်ဆက်လက်၌လက်သို့မသွားကြပါဘူး။ ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့စေခြင်းငှါနေစဉ် စာရင်းအင်း လေ့လာမှုအတော်များများတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဤဥပမာသည်လူနည်းစု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကြီးမားသောကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုမောင်းနှင်နေသောကြောင့်နမူနာတစ်ခု၏လူနည်းစုကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လေ့လာမှုအတော်များများကကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုသည်လက်ရှိအချိန်တွင်ရိပ်မိပြproblemsနာများ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသေချာသည်၊ သို့သော် ထပ်မံ၍ ထိုကဲ့သို့သောပြissuesနာများသည်မည်မျှတူညီကြောင်းပြောဆိုရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အခြေခံလမ်းကြောင်းများနှင့်ပုံစံများကိုလေ့လာခြင်းအပါအ ၀ င်နောက်ထပ်သုတေသနပြုရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ပစ်မှတ်ဆောင်းပါး၏ပုံ (၁) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ စာပေများကိုဂရုတစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်ပစ်မှတ်တွင်ဖော်ပြထားသည့် meta-analysis သည်လေ့လာမှုများ ၁၂ ခုသာပါဝင်သည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုအရပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု၏ longitudinal အကျိုးသက်ရောက်မှုကို meta-analysis သည်လေ့လာမှု ၅၄ ခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (Fairbairn et al ။ , 2018), Pinquart (မိဘအုပ်ထိန်းအပေါ်တစ်ဦးမကြာသေးခင်က Meta-analysis သည်နေချိန်မှာနှင့် 1000 လေ့လာမှုများကျော်ကောင်းစွာအသုံးချကလေးငယ်များအတွက်အပြုအမူတွေ externalizing 2017) ။ တရားမျှတသောဖြစ်စေရန်, ပို. တဦးတည်းကသူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်မူလအာရုံကျဉ်းမြောင်းခြင်း, လျော့နည်းစာပေမဆို Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအပေါ်ဆွဲရပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးဤအဆိုပြုထားသောမော်ဒယ်နှင့် ပတ်သက်. ကျယ်ပြန့်ကောက်ချက်စဲသင့်ကြောင်းအထောက်အထားတစျခုထက်ပိုအပိုင်းအစများကိုပါဘူး။
မလုံလောက်သောဒေတာနှင့်အတူဧရိယာ overgeneralizing မှပြဿနာကြိုးစားမှု၏နောက်ထပ်ဥပမာအားပစ်မှတ်ဆောင်းပါးအတွင်းစာပေပြန်လည်သုံးသပ်၏နောက်ဆုံးတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Grubbs et al ။ (2018) ထိုငြင်းခုန်ရန်ကြိုးပမ်းမှု "ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ် Self-ရိပ်မိပြဿနာများ၏အပြင်းထန်ဆုံးခန့်မှန်းသည်။ " တဖန်ငါတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲကျဉ်းမြောင်းနှင့်ကန့်သတ် box ထဲမှာညစ်ညမ်းပညာသင်ဆုစောင့်ရှောက်သောဤစဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်အတူအများအပြားန့်အသတ်ကိုရှာပါ။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်နောက်တဖန်ယင်းကဲ့သို့ပညာသင်ဆုများ၏အာရုံစိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆို။ self-ရိပ်မိပြဿနာများဆက်ဆက်စဉ်းစားရန်အရေးကြီးလှသည်ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းမှကြွလာသောအခါအရေးပါမှု၏တစ်ခုတည်းသောရလဒ်များမရှိကြပေ။ ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးအသီးအနှံများသုတေသနညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစာပေနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့ဘယ်မှာအမှန်စင်စစ်, ဒီအာရုံလျစ်လျူရှု: relational ရလဒ်များ။ Wright, Tokunaga, Kraus နှင့် Klann အားဖြင့်မကြာသေးမီ Meta-analysis သည် (အားဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ်2017), ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုတို့အကြားသေးငယ်သော်လည်းတသမတ်တည်းဆက်နွယ်မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လက်ရှိစာပေတွင်ရလဒ်များအကြားအဆက်မပြတ်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြီးထွားလာသောတိုးပွားလာနေသောလေ့လာမှုများအရမိတ်ဖက်တစ် ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးမှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအမျိုးမျိုးရှိခြင်းအပါအ ၀ င်အပြုသဘောဆောင်သောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည် (Bridges & Morokoff, 2011), လိင်အရည်အသွေး (Poulsen, Busby, & Galovan, 2013), ဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းမှု (Muusses, Kerkhof, & Finkenauer, 2015), ဖောက်ပြန်မှု (Maddox, Rhoades, & Markman, 2011လိင်လုပ်သားများနှင့်အတူ), နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (Wright, 2013).
တစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုသုတေသနပြုသကဲ့သို့, ဒီ relational သုတေသနသည်၎င်း၏ပြproblemsနာများမရှိဘဲမဟုတ်ပါဘူး (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Campbell & Kohut ကိုကြည့်ပါ, 2017) နှင့်ရလဒ်များကို Contextual အချက်များတစ်အရေအတွက်အထိခိုက်မခံဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ညစ်ညမ်းတစ်ဦးတည်းကြည့်ရှုအားပေးသို့မဟုတ်အတူတကွစုံတွဲဒိုင်းနမစ် (Maddox et al နှင့်ဆက်စပ်သောဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းတခုတခုအပေါ်မှာအရေးကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်နေသည်ရှိမရှိ။ , 2011) ။ ကျားကိုလည်းအများဆုံးအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များ (Poulsen et al နဲ့ဆက်စပ်ကြည့်ရှုခြင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပေါ်လာသောအထီးမိတ်ဖက်များကတစ်ဦးချင်းစီကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူအရေးပါသောက Moderator ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ , 2013) ။ ဤသည် dyadic ပညာသင်ဆု relational အခင်းအကျင်းသေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုတစ်ဦးချင်းစီသုခချမ်းသာနှင့်ဆက်စပ်သောမည်သို့နားလည်သဘောပေါက်၏အခြားအရေးပါသောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ relational ဒိုင်းနမစ်လည်းဆက်ဆံရေးအတွက်သူတို့အဘို့ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖွယ်ရှိသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်အခြားတဦးမိတ်ဖက်ဖွယ်ရှိသက်ရောက်မှုရလဒ်များ၏ incongruence, ရှာဖွေတွေ့ရှိညှိနှိုင်း, ဒါမှမဟုတ်ဆီးအတားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောအခြေအနေတွင်သို့မဟုတ်ဆွေးနွေးမှုအစားအကျိုးစီးပွား၏တစ်ဦးတည်းသောရလဒ်ကိုအဖြစ် Self-ရိပ်မိပြဿနာများအပေါ် fixated ပုံဟာ PPMI မော်ဒယ်အတွက်ပျက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။
စံပြ Grubbs et al အားဖြင့်အဆိုပြုထားသောအခြားနည်းများသေးရှိပါသည်။ (2018သုတေသီများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ယေဘူယျအားဖြင့်နည်းစနစ်အကန့်အသတ်နှင့်သာရှိနေသည်။ အခြားသူများစွာကဲ့သို့ပင် Grubbs et al ။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုရန်လေ့လာရန်ဤအထွေထွေဝေါဟာရကိုအသုံးပြုခြင်း၏မူလပြtheနာများကိုလျစ်လျူရှုသော“ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း” ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုခြင်း။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ် (၀ ီလျှိုနှင့်ဘတ်စ်ဘီ) 2016)“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်သင်မည်သူတောင်းသည်နှင့် မူတည်၍ ကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်စစ်တမ်းများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးအနှုန်းကိုမူလကပင်ပြproblemနာရှိသည်ဟူသောအချက်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များရှိသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် ဝေါလွိုက်၊ 2017) ။ အိမ်ထောင်သည်တစ် ဦး ချင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖော်ပြလေ့ရှိပြီးအချို့သောလိင်မီဒီယာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအခြားသူများမှသာဖော်ပြရန်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခြင်းမရှိသောပုံမှန်မီဒီယာများ (သို့မဟုတ်ကြော်ငြာများ) ကိုသာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုတံဆိပ်တစ်ခုအောက်တွင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်အလွန်အမင်းမှီခိုအားထားနေရသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏အကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်ဟုအကြံပြုထားသောသေးငယ်သော်လည်းကြီးထွားလာနေသောစာပေများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ 2017; Leonhardt & Willoughby၊ 2017; ၀ ဲလ်ဘက်биနှင့်ဘတ်စ်ဘီ၊ 2016) ။ အဲဒီအစား PPMI ရိုးရှင်းစွာအပေါငျးတို့သညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာယူဆထက်ပညာရှင်များအမျိုးမျိုးများအတွက်လိင်ကိစ္စမီဒီယာအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်သောမည်အကြောင်း, ဘယ်လိုကိုယ်ကျင့်တရား incongruence သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်ဘယ်လိုကိုယ်ကျင့်တရား incongruence အချို့အမျိုးအစားများများအတွက်တည်ရှိစေခြင်းငှါထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အဘို့အ, ကအရေးကြီးပါတယ် လူတွေ။
ထိုကဲ့သို့သော General ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပြင် PPMI ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ပြဿနာများများအတွက်ရှင်းလင်းချက်အဖြစ်ဘိသိက်ခံနိုင်မီခဲ့ခံရဖို့နဲ့အခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားရှိပါတယ်။ Grubbs et al အကြောင်းကိုမှတ်သားဖို့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ။ ရဲ့ (2018) မော်ဒယ်ဆိုသည်မှာအချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုသည်ပြisနာဖြစ်သော်လည်းကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီသောသို့မဟုတ်မကြာခဏနောက်ကွယ်မှဘာသာတရားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်သုခချမ်းသာကြားရှိဆက်နွယ်မှုများစွာကိုမဖျက်ပစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုများအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်သာယာဝပြောခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုများမှာဘာသာရေးနှင့်အခြားအခြေခံတန်ဖိုးများကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်၌ပင်ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်းပြသခဲ့သည် (Perry & Snawder, 2017; Willoughby၊ ကာရိုး၊ Busby နှင့်ဘရောင်း၊ 2016; Wright, 2013) ။ ဥပမာအားဖြင့်, Perry နဲ့ Snawder (နေချိန်မှာ2017) ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အနိမ့်မိဘအုပ်ထိန်းရညျအသှေးအကြားအသင်းအဖွဲ့ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအကြားပိုမိုမြင့်မားခဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုစျယာနျဘာသာတရားကိုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်လျှင်ပင်လူအားလုံးတို့အတွက်တည်မြဲမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလည်း (အခြေခံသဘောထားများနှင့်ယုံကြည်မှုများအဘို့ကိုထိန်းချုပ်လျှင်ပင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေအတွက်ဆိုင်းနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ Wright ကိုတွေ့ထားပြီ, 2013) ။ ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမခွဲခြားဘဲတသမတ်တည်းပေါ်လာသည့်ဤအခြေခံအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အကောင်းဆုံးသက်သေသာဓကမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အခြေခံတန်ဖိုးများသို့မဟုတ်ဘာသာတရားများကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်၌ပင်အဆိုးမြင်ဆက်နွယ်မှုရလဒ်များနှင့်တသမတ်တည်းဆက်နွယ်နေသည့် relational ပညာသင်ဆုစာပေထဲတွင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် (Doran & Price, 2014; Maas, Vasilenko, & Willoughby၊ 2018; Poulsen et al ။ , 2013; Willoughby et al ။ , 2016).
အတူတကွ Grubbs et al အတွက်အာရုံစူးစိုက်ထားပါ။ (2018) အားလုံးသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းပင်အများဆုံးစားသုံးသူများအတွက်ထိရောက်သောမော်ဒယ်ဖြစ်လွန်းတိကျတဲ့နှင့်လည်းကျဉ်းမြောင်းတဲ့ပုံရသည်။ အဆိုပါမော်ဒယ်လည်း၎င်း၏လျှောက်လွှာလွန်းမြေပြင်နှင့်လည်းအများအပြားအခင်းအကျင်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုအတွက်ညစ်ညမ်းပညာသင်ဆု၏အလွန်အကျွံဒဏျခတျသောတူညီန့်အသတ်သို့ကျရောက်ပါတယ်။ အဆိုပါညစ်ညမ်းပညာသင်ဆု၏အလွန်အကျွံအတွက်ဆက်လက်ရှိနေရန်အကြောင်းအရာပုံရသည်သောသေးငယ်တဲ့ box ကိုညစ်ညမ်းရလဒ်များသာသေးငယ်တဲ့အမျိုးမျိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသင့်ကြောင်းရိုးရှင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအယူအဆရေးရာ box ကိုဆက်ရှိနေသေး။ ဟုတ်ပါတယ်, ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များရှာဖွေစူးစမ်းသည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ဆနျးစစျဖို့အရေးပါသောအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော incongruence, ကြည့်ရှုအားပေးလျက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏ content မှပြောပြတယ်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုများ၏တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေတွင်, ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းစားသုံးသူများဖြစ်ကောင်းသေးငယ်အချိုးအစားအသိအမှတ်ပြုအမှန်တကယ်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence အချို့အဆင့်အထိကိုတွေ့ကြုံခံစားတဲ့သူကိုဘယ်လိုသို့သော်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ, အ PPMI မော်ဒယ်ဖမ်းဖြစ်ပါသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစာပေအများကြီးကဲ့သို့တူညီသောန့်အသတ်အယူအဆရေးရာ box ထဲမှာ။ Grubbs et al ။ သူတို့ရဲ့စံပြမသက်ဆိုင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသုံးစွဲအချိန်, ကထိုကဲ့သို့သောတညစ်ညမ်းစွဲရှိပြီးယင်းယုံကြည်ချက်အတိုင်း Self-ရိပ်မိပြဿနာများ, တိကျစွာစစ်မှန်တဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည် "သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ပဟေဠိဖြေရှင်းကူညီပေးနိုငျတောင်းဆို ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ကျန်းမာရေးသုခချမ်းသာများနှင့်ဆက်လက်သုတေသနထို့ကြောင့်အဓိကအာရုံစိုက်အပေါ်ရှိပါတယ်။ "ဤ" စစ်မှန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု "ဖွယ်ရှိကောင်းစွာနှစ်ဦးစလုံး Self-ရိပ်မိသက်ရောက်မှုအပေါ်ကျဉ်းမြောင်းခြင်းနှင့်တိကျသောအာရုံနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ကျော်လွန်ချဲ့ထွင်။ Grubbs et al အဖြစ်။ မှတ်ချက်ချအများအပြားလေ့လာမှုများ Self-ရိပ်မိပြဿနာများကိုမကြာခဏပင်တသမတ်တည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့ကြပြီကိုကောင်းစွာဖြစ်ခြင်း၏အခြားအမှတ်အသားများလေ့လာမှုပိုကောင်း focal အချက်များဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်း, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုခိုင်မာတဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ရှိသည်နှင့်သူတို့အပြုအမူတွေနဲ့သိမြင်မှုအတွက်မကိုက်ညီနှင့်အတူထွေးကဲ့သို့သောမရရှိခြင်း၏သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုများ၏ဆက်စပ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးသူအချို့တစ်ဦးချင်းစီရှိပါတယ်။ ထိုသို့သောအကြောင်းရှည်လျားလူမှုရေးစိတ်ပညာ (Festinger, ၏လယ်ပြင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးသောတူညီသိမြင် dissonance သီအိုရီအတွက်အမြစ်တွယ်နေသည် 1962) ။ သင့်လျော်စွာလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာအဆိုပြုထားမော်ဒယ် utility ကိုရှိစေခြင်းငှါနေစဉ်, ပညာရှင်များထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသည်သောအခင်းအကျင်း၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းသက်ဆိုင်ကြောင်းယူဆအတွက်သတိထားရပါမည်။
အန်ဒါဆင်,, CA, Bushman, BJ, Bartholow, bd, Cantor, ဂျေ, Christakis, ဃ, Coyne, SM ... Huesmann, R. (2017) ။ မျက်နှာပြင်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူငယ်အပြုအမူ။ ကလေးအထူးကု, 140(ပျော့ပျောင်း။ 2), S142-S147 ။CrossRefGoogle Scholar
Bridges, AJ, & Morokoff, PJ (2011) ။ လိင်မီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ကွဲစုံတွဲများအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှု။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Relationships, 18(4), 562-585 ။CrossRefGoogle Scholar
Busby, DM, Chiu, HY, Olsen, JA, & Willoughby, BJ (2017) ။ အပြာစာပေရုပ်ပုံ၏အရွယ်အစားကိုကြည့်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46, 1723-1731 ။CrossRefGoogle Scholar
ကမ့်ဘဲလ်, အယ်လ်, & Kohut, တီ (2017) ။ အချစ်ဇာတ်လမ်းများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ စိတ်ပညာအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်, 13, 6-10 ။CrossRefGoogle Scholar
ကာရိုးလ်၊ JS၊ Padilla-Walker, LM, Nelson, LJ, Olson, CD, Barry, C. , & Madsen, SD (2008) ။ မျိုးဆက် XXX - ထွန်းသစ်စလူကြီးများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလက်ခံမှုနှင့်အသုံးပြုမှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်, 23, 6-30 ။CrossRefGoogle Scholar
Coyne, SM, Padilla-Walker က LM, Stockdale, L. , & Day, RD (2011) ။ ဂိမ်းပေါ်…မိန်းကလေးများ - ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပြုအမူနှင့်မိသားစုရလဒ်များကိုပူးတွဲကစားခြင်း။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်, 49, 160-165 ။CrossRefGoogle Scholar
Doran, K. , & စျေး, ဂျေ (2014) ။ အပြာစာပေနှင့်အိမ်ထောင်ရေး။ မိသားစုနှင့်စီးပွားရေးကိစ္စများ၏ဂျာနယ်, 35, 489-498 ။CrossRefGoogle Scholar
Fairbairn, အီး, Briley, DA, Kang, D. , Fraley, RC, Hankin, BL, & Ariss, တီ (2018) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်လူ့ပူးတွဲမှုလုံခြုံရေးအကြား longitudinal အသင်းအဖွဲ့များတစ် Meta-analysis သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 144, 532-555 ။CrossRefGoogle Scholar
Festinger, အယ်လ် (1962) ။ သိမြင်မှု dissonance ၏သီအိုရီ (Vol ။ 2) ။ Palo Alto, CA: စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။Google Scholar
Fritz, N. , & ပေါလု, ခ (2017) ။ အော်ဂဇင်မှသည်ရိုက်တာသို့ကူးပြောင်းခြင်း - အမျိုးသမီးများအတွက်၊ အမျိုးသမီးများအတွက်နှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များကို objectify နှင့် objectifying ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 77, 639-652 ။CrossRefGoogle Scholar
Grubbs, JB, Exline, JJ, Pargament, KI, Volk, F. , & Lindberg, MJ (2017) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဘာသာရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46, 1733-1745 ။CrossRefGoogle Scholar
Grubbs, JB, & Perry, SL (2018) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224499.2018.1427204.
Grubbs, JB, ပယ်ရီ, SL, Wilt, JA, & ရိဒ်, RC (2018) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြproblemsနာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1248-x.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Grubbs, JB, Volk, F. , Exline, JJ, & Pargament, KI (2015) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - စွဲစွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အတိုချုပ်အတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုခြင်း။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 41, 83-106 ။CrossRefGoogle Scholar
Hald, GM က, & Malamuth, N. (2008) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၏မိမိကိုယ်ကိုမြင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 37, 614-625 ။CrossRefGoogle Scholar
Halpern, AL (2011) ။ DSM-5 အတွက်ပါဝင်ဘို့ hypersexual ရောဂါ၏အဆိုပြုရောဂါလက္ခဏာတွေကို: မလိုအပ်တဲ့နှင့်အန္တရာယ်ရှိသော [Editor ကိုမှပေးစာ] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40, 487-488 ။CrossRefGoogle Scholar
Leonhardt, ND, & Willoughby, BJ (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ လိင်မှုကိစ္စစိတ်ကျေနပ်မှုရစေသောရှုထောင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးသောလိင်ဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်သူတို့၏ကွဲပြားသောအသင်းအဖွဲ့များ။ လူမှု၏ဂျာနယ်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0265407517739162.
Maas, MK, Vasilenko, SA, & Willoughby, BJ (2018) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်ကွဲချစ်သူစုံတွဲများအကြားဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလက်ခံမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွယ်ကပ်မှု၏အခန်းကဏ္။ ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 55, 772-782 ။CrossRefGoogle Scholar
Maddox, AM, Rhoades, GK, & Markman, HJ (၂၀၁၁) ။ တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်အတူတကွလိင် - ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများကြည့်ရှုခြင်း: ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40, 441-448 ။CrossRefGoogle Scholar
Muusses, LD, Kerkhof, P. , & Finkenauer, C တို့ (2015) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆက်သွယ်မှုအရည်အသွေး - လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအကြားညှိနှိုင်းမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်အင်တာနက်ပစ္စည်းများ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်အကြားကြာရှည်စွာလေ့လာခြင်း။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 45, 77-84 ။CrossRefGoogle Scholar
နယ်လ်ဆင်, LJ, Padilla-Walker က, LM, & ကာရိုး, JS (2010) ။ “ ဒါဟာမှားတယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါလုပ်နေတုန်းပဲ” - ဘာသာရေးလူငယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြာစာပေများကိုမသုံးပါ။ ဘာသာတရားနှင့်ဝိညာဉ်ရေး၏စိတ်ပညာ, 2, 136-147 ။CrossRefGoogle Scholar
ပယ်ရီ, SL, & Snawder, KJ (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ ဘာသာရေးနှင့်မိဘနှင့်ကလေးဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46, 1747-1761 ။CrossRefGoogle Scholar
ပယ်ရီ, SL, & Whitehead, AL (2018) ။ ယုံကြည်သူများအတွက်မကောင်းပါလား အမေရိကန်အမျိုးသားများအကြားဘာသာရေး၊ လိင်သုတေသနဂျာနယ်. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224499.2017.1423017.
Pinquart, အမ် (2017) ။ မွမ်းမံထားတဲ့ Meta-analysis သည်: ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ပြဿနာများကို externalizing နှင့်အတူရှုထောင့်နှင့်စတိုင်များပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏အသင်းအဖွဲ့များ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ, 53, 873-932 ။CrossRefGoogle Scholar
Poulsen, FO, Busby, DM, & Galovan, AM (၂၀၁၃) ။ အပြာစာပေအသုံးပြုမှု။ ၎င်းကိုမည်သူအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်စုံတွဲ၏ရလဒ်များနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 50, 72-83 ။CrossRefGoogle Scholar
စျေး, ဂျေ, ပက်တာ, R. , Regnerus, အမ်, & Walley, ဂျေ (2016) ။ XXX ကဘယ်လောက်များများသုံးစွဲမလဲ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများကို ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှစ၍ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 53, 12-20 ။CrossRefGoogle Scholar
Reid, RC, & Kafka, အမတ် (၂၀၁၄) ။ hypersexual disorder နှင့် DSM-2014 အငြင်းပွားမှုများ။ လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများ, 6, 259-264 ။CrossRefGoogle Scholar
ဝမ်, ခ, တေလာ, အယ်လ်, & Sun က, ဆိုးကျိုး (2018) ။ အတူတူကစားသောမိသားစုများအတူတကွနေထိုင်ကြသည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများမှတစ်ဆင့်မိသားစုနှောင်ကြိုးကိုစစ်ဆေးခြင်း။ မီဒီယာနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအသစ်. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444818767667.
Willoughby, BJ, & Busby, DM (2016) ။ ကြည့်ရှုသူ၏မျက်စိထဲမှာ: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ၏သဘောထားအမြင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှာဖွေစူးစမ်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 53, 678-688 ။CrossRefGoogle Scholar
Willoughby, BJ, ကာရိုး, JS, Busby, DM, & ဘရောင်း, C. (2016) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ကွာခြားချက်များကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောစုံတွဲများအကြား - စိတ်ကျေနပ်မှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆက်ဆံမှုဖြစ်စဉ်များနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 45, 145-158 ။CrossRefGoogle Scholar
Wright, PJ (2013) ။ အမေရိကန်အထီးနှင့်အညစ်ညမ်း, 1973-2010: စားသုံးမှု, ခန့်မှန်း, Correlate ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 50, 60-71 ။CrossRefGoogle Scholar
Wright, PJ, Tokunaga, RS, Kraus, အေ, & Klann, အီး (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသုံးစွဲမှုနှင့်ကျေနပ်မှု။ Meta-analysis ။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 43, 315-343 ။CrossRefGoogle Scholar